RAMIAKATRARIVO, MPITARIKA MAHAY – Blaogin'i Voniary
RAMIAKATRARIVO, MPITARIKA MAHAY
Tao Manjakadoria, tamin’ny vanim-potoanan’ny faha-Mpanjaka no niseho ny tantara. RAMIAKATRARIVO, mpanjaka nasondrotry ny sainy sy ny fahaizany anefa efa naneho fahaiza-mitarika nampitolagaga ny besinimaro. Vokatr’izany, tsy ny vahoaka teo ambany fifehezany ihany no nankamamy azy fa na ny mponina sy ny andriana manodidina aza dia nanaja azy fatratra. Eny fa na hatramin’ny fahavalo azony babo aza dia niaiky ny FAHENDRENY. Mendrika atao filamatra tokoa raha ity mpanjaka ity. Diniho ange ireto toetra nasehony ireto e!
Teo am-pandosirana ny tafi-dRAMAROVOLANA iny indrindra izy sy ny mpanara-dia azy no tonga teo amin’ny renirano lehibe anankiray feno voay. Natao àry tetika mba hampilefa ireto biby be amin’ny alalan’ny fanakorontanana sy fanabatabana ny rano. Toa nahomby ihany ilay paikady. Iny efa saika tafita teo amin’ny nosikely afovoan-drano iny mihitsy izy ireo no norampasan’ny mamba i Doaka ka lasany tany. Kivy sy nivaloharika izy rehetra nanoloana izany.
Teo indrindra no nandray fitenenana Ramiakatrarivo hanentana azy ireo hamonjy ity namany. Hoy izy: “Ey Ry zalahy! Tonga amin’ny teny nifanekena ity ka aoka tsy hifanary. Raha izay mamba anankiray no hanao sinto-mahery ka hikepoka ny namantsika foana eto, ndao hikambana fa tsy ho resin’izay mamba anankiray isika.” P28
Lesona: Ny tena mpitarika dia mahay misafidy teny anentanana ny olony: kabary MAZAVA sy teny AVY AO AM-PO ka mora mahatohina ny atifanahy.
Fandraisana anjara mavitrika
Tsy vitan’izany fa “raha vao tapitra ny teniny dia noraisiny ny antsy ary lasa izy…” P28. Vokatry ny kabariny izay namafisin’ny fihetsiny feno FAHAVONONANA dia niakatra ny hafanam-pon’ireto namany ka niara nirohotra izy rehetra nanaraka azy. Voavonjy soa aman-tsara i Doaka noho ny fiaraha misalahin’izy ireo.
Lesona: Ny tena mpitarika dia mahay mamelona AFO AO AM-POn’izay tarihany amin’ny alalan’ny teniny fa indrindra amin’ny FIROTSAHANY AN-TSEHATRA mialoha ny rehetra. “Ny atao mahatarika”.
Nony maty ilay mamba ary avotra ilay namana dia inona no nataon’ity mpitarika? NISAOTRA an’Andriamanitra sy ny razana izy ary nisaotra ireo mpanaraka azy. Tsy nataony ambanin-javatra ny fandavan-tena sy ny fanaovana vy very ny ainy nasehon’ireto namany ka naneho fankasitrahana izy. Fanampin’izany dia namporisika azy ireo izy mba haharitra hatrany amin’ny firasan-kina. Nanoloana izany dia nankasitraka tao am-pony koa ireto namany ary nivonona hatrany ny hanara-dia azy.
Lesona: Ny tena mpitarika dia manana fanentren-tena ka mahay mankasitraka izay niara-nisalahy taminy. Entina amporisihana ny olona tarihina ihany koa ny fisaorana.
Sao lahy varimbarian’ny lavitra isika ka tsy mahita ny eo ambany maso. Dradradradraina hatraiza hatraiza ny hoe “leadership” ary toa zavatra hafa manokana nentin’ny vazaha avy any ivelany any izy io. Hitantsika anefa izao fa RAMIAKATRARIVO mpanjaka tamin’izany andro izany dia efa nahay nitarika araka ny tokony ho izy. Betsaka ireo Malagasy fahiny no nanana fahaizana sy fahendrena tsara halain-tahaka fa, indrisy, takona izany. Koa mazotoa ary isika mandalina sy mikaroka ireo tsara teo amin’ny Malagasy. Ny blaogin’i Voniary dia hiezaka hatrany hitondra izany aminao.
faha-mpanjaka, fahaiza-mitarika, haitarika, leadership, ramiakatrarivo, tao manjakadoria
TONGAVA MITSIDIKA AN’AMBOHIMANGA ROVA
2 commentaires sur “RAMIAKATRARIVO, MPITARIKA MAHAY”
22 février 2017 à 5 h 45 min
Mahafinaritra ilay fihezahana manazava tantara (sa angano?) entina manentana manentana sy mitaiza.
Ilay fahavononana anavotra ny mpiara-dia solafaka any ambavan’ny mamba sy fanatanterahana izany ka dia tena zava-dehibe tokoa.
Tantara ao amin’ny boky « Tao Manjakadoria » nosoratan’ny Rév. Maurice Rasamuel izy io! Betsaka ny tantara na angano Malagasy azo akana lesona tsara fa isika no mila mitrandraka azy. Mirary soa e!